कसरी बनाउने सन्तुलित आहार ? | Sudur Press
कसरी बनाउने सन्तुलित आहार ?
– घिउ तेल तथा अन्य चिल्लोको मात्रा जतिसक्दो कम प्रयोग गर्ने । खाना पकाउनका लागि घिउको सट्टा शुद्ध तोरीको तेल नै प्रयोग गर्ने ।
– नुन दैनिक ३ देखी ५ ग्राम भन्दा बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन । नुन थपेर खाने बानी गर्नु छोड्नु राम्रो हुन्छ ।
– बिहान बेलुकीको खानामा हरियो साग हुनु अत्यन्त लाभदायी हुन्छ । दैनिक कम्तीमा एक पल्ट फलफूल खानुपर्छ ।
– बेलुकीको खानामा २– ३ वटा सुख्खा गहुको रोटी साग र मौसमी तरकारी भएको राम्रो । बेलुकीको खाना ८ बजेभित्र खाई सक्नु पर्छ । बिहानको एक छाक मात्र भात खाने गर्नु राम्रो । तर खानको मात्रा सबैका लागि एकनास भने हुँदैन । धेरै शारीरिक काम गर्नेले धेरै खानुपर्छ , थोरै काम गर्नेले थोरै खानुपर्छ । काम कम माम धेरै गर्नुहुँदैन । बेलुकीको खाना खाएपछि तुरुन्त सुत्नु हुँदैन । कम्तीमा १ –२ घण्टा पछि मात्रा सुत्नु पर्छ ।
– शाकाहारी भोजन मुटु रोगका लागि फाइदा जनक हुन्छ । तर नियन्त्रित रूपमा माछा मासु खाएमा हानी हुँदैन । खसी, राँगो र बङ्गुरको मासुले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ । माछा र कुखुराको मासुले कम बढाउँछ । चिल्लो नराखी माछा र कुखुराको मासु पकाई खादा हानी गर्दैन । माछा मासु बिहान र दिउसोको खानामा मात्र प्रयोग गर्नु राम्रो । बेलुकी माछा मासु नखानु नै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ।
– उच्च फाइबर युक्त खानाले मुटुलाई फाइदा गर्छ । खानामा फाइबरको प्रमुख स्रोत गहुँ, गेडागुडी, हरियो सागपातहरु नै हुन । अङ्कुरित गेडागुडी खानु अझ बढी लाभदायक हुन्छ । फापर, कोदो, जौ, मकै आदिले पनि मुटुलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।
– गाउँघरमा धेरै प्रयोगमा आउने गुन्द्रुक, आटो, फापरको रोटी, कोदोको रोटी, कुरिलोको सुप , कोइरालाको अचार , केराको बुगाको अचार, निउरीको तरकारी , लौकाको तरकारी, तिते करेलाको अचार, भुटेको मकै, भटमास, चना केराउ, दाँते ओखर आदि मुटुको लागि अत्यन्त लाभदायी मानिन्छ ।
– स्वास्थ्य मुटुका लागि खाना थोरै थोरै तर धेरैपल्ट खानु उचित हुन्छ । दुई छाक खाने तर पेट कसेर खाने, अनि खाने वित्तकै सुत्ने † यो मुटुका लागि अत्यन्तै खतरनाक बानी हो ।
– खानामा कोलेस्ट्रोले मात्रा जति कम भयो मुटुलाई त्यति हानी कम हुन्छ ।
– बेलुकीको खानामा दैनिक एक पोटी काचो लसुन खादा फाइदा हुन्छ । यसले रगतको कोलेस्ट्रोल घटाउँछ साथै एस्पिरिनले जस्तै रगतलाई पातलो पनि पार्दछ ।